सुन तोलाकै रु. १ लाख नजिक, ३ दिनमै बढ्यो रु. ३ हजार Bizshala -
सुन तोलाकै रु. १ लाख नजिक, ३ दिनमै बढ्यो रु. ३ हजार
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ तोलकै १ लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
पछिल्ला केही दिनयता सुनको भाउमा उछाल आएसँगै तोलकै १ लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको हो। यो साता कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार तोलामै १ हजार २०० रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९७ हजार ६० रुपैयाँ पुगेको छ। यो भाउ नेपालकै इतिहासमा हालसम्मकै उच्च रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
हिजो आइतबार पनि सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ८६० रुपैयाँ कायम भएको थियो।
गत साता कारोबारको अन्तिम शुक्रबार सुनको भाउ तोलामै १ हजार ३०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९५ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ३६५ रुपैयाँ पुगेको थियो।
यसैगरी सोमबार चाँदीको भाउमा पनि उछाल आएको छ। आज तोलामै ५५ रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै चाँदी प्रतितोला १ हजार २१० रुपैयाँ कायम भएको छ। चाँदीको यो हालसम्मकै सर्वाधिक मूल्य पनि हो।
हिजो आइतबार चाँदीको भाउ तोलामा ५ रुपैयाँ बढ्दै १ हजार १५५ रुपैयाँ पुगेको थियो।